काठमाडौं, २८ कात्तिक । जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारिसकेका छन् ।
यद्यपि नतिजा औपचारिकरुपमा घोषणा गर्न बाँकी छ । तर पराजित भए पनि अहिले राजनीतिक बजारमा ट्रम्पको चर्चा घटेको छैन । अब ट्रम्प के गर्छन् भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ । राजनीति छाड्लान् कि नछाड्लान् ? नयाँ पार्टी पो खोल्छन् कि ? २०२४ को राष्ट्रपति चुनाव पुनः लड्ने योजना पो बनाउँछन् कि आदि ।
७४ वर्षीय ट्रम्प धनाढ्य व्यापारी हुन् । उनको अर्को परिचय हो व्यापारी । रियालिटी टिभी स्टार पनि उनी बनिसकेका छन् । यसपछि उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् ।
अमेरिकी म्यागजिन ‘पोलिटिको’का अनुसार ट्रम्प कयौं साना-ठूला मिडिया हाउसका मालिक पनि हुन् । उनले न्यूजम्याक्स आउटलेटलाई बढाउन सक्छन् । हालसालै उनले यसको जिम्मेवारी आफ्नो नजिकका साथी क्रिस रुडीलाई दिएका छन् । उनीसँग अमेरिकाको न्यूज नेटवर्क, सिंक्लेयर ब्रोडकास्टिङ र देशभर स्थानीय टिभी स्टेशनहरु रहेका छन् ।
ट्रम्प परिवारसँग करिब ५०० प्रकारका व्यापार छन् । उनको नामबाट कयौं कम्पनिहरु छन् । होलट, रिसोर्ट र करोडौं डलरको गल्फ क्लब । फोर्ब्स म्यागजिनको एक रिपोर्टका अनुसार, महामारीको क्रममा ट्रम्पका यी कम्पनिहरुले लाखौं डलर नोक्सान व्यहोरेका छन् ।
बढी लगाव मिडियातिर
यसक्रममा उनको कुल आम्दानीमा १०० करोड डलर कम भएको थियो । ट्रम्पको बायोग्राफर माइकल डी’एन्टोनियोका अनुसार ट्रम्पको धेरै लगाव मिडियातिर छ । २०१६ मा उनलाई लाग्यो कि हिलारी क्लिन्टनसँग चुनाव हारेमा अभियानका लागि एक मिडिया कम्पनी सुरु गर्ने योजना बनाएका थिए ।
अब के गर्लान् ट्रम्पले ?
ट्रम्पका कतिपय समर्थकहरुलाई लागिरहेको छ कि उनले छिट्टै राजनीति छाड्नेछन् । कतिपयले भने ट्रम्पले नयाँ राजनीतिक दल बनाउन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । किनकी ट्रम्प आवद्ध रिपब्लिकन पार्टीमा उनका समर्थक र विरोधी दुवै छन् । कतिपयले भने ट्रम्पले जिमी कार्टर र जर्ज बुश सिनियरले जस्तै राजनीतिबाट दूरी बनाउन सक्ने अनुमान गरेका छन् । कतिपयले भने २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्प पुनः मैदानमा उत्रनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
सजिलो छैन आगामी बाटो
ट्रम्प जहिलेसम्म राष्ट्रपति कायम रहन्छन्, तबसम्म उनीविरुद्ध आराधिक मुद्दाहरु नचल्न सक्छन् । तर, ह्वाइट हाउसबाट निस्कनासाथ उनीविरुद्ध कयौं मुद्दाहरु चल्न सक्छन् । ऋण, कर लाभ, आर्थिक लाभ र महिलाको मुख थुन्न पैसाको दुरुपयोग जस्ता कयौं आरोप उनीहरु विरुद्ध छ । कतिपयको भने अनुसन्धान जारी नै छ ।
न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ४.२१ करोडको लोन त यस्तो छ कि जसको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी ट्रम्प आफैं बसेका छन् । यीमध्ये धेरै ऋण विदेशका बैंक र कम्पनीहरुबाट लिएका छन् । यसलाई चार वर्षभित्र चुक्ता पनि गर्नुपर्छ ।
आर्थिक मुद्दाहरुमा अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी जाँच एजेन्सी आईआरएसका अनुसार २०१० मा ट्रम्पले एफिडेविटमा भनेका थिए, ‘२००८ र २००९ को क्रममा मेरा कम्पनीहरुलाई १४० करोड डलर घाटा भयो । त्यसकारण, करमा ७.२ करोड छुट दिनुपर्छ ।’